Nebulizing ပျံ့, Nebulizing မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့တရုတ်နိုင်ငံ, Nebulizer ရေနံပျံ့ထုတ်လုပ်သူ
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:Nebulizing ပျံ့,Nebulizing မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့,Nebulizer ရေနံပျံ့,Ultrasonic ရနံ့ကုထုံပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Nebulizing ပျံ့
Nebulizing ပျံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Nebulizing ပျံ့, Nebulizing မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Nebulizer ရေနံပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ရနံ့ကုထုံး Nebulizer မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ကား
ရေသယ်ဆောင်နိုင်သော USB Wood Aroma Car Diffuser မရှိပါ
ကားအတွက် OEM / ODM / OBM Service Aroma Essential Oil Diffuser
Car Mist Aroma Mini Diffuser မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ USB
အသုံးပြုသူလက်စွဲနှင့်အတူ USB Aroma Diffuser Nebulizer စက်
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Nebulization လျှပ်စစ်လှငျပျံ့
ရီးရဲလ် Wood ကပျရနံ့ကုထုံ Nebulizer ပျံ့
Nebulizer မရှိမဖြစ်ရေနံ USB အနံ့ပျံ့လှငျ
အိတ်ဆောင် Wood ကအကောင်းဆုံးကားပျံ့မရှိမဖြစ်ဆီ
မော်တော်ကားသည်အနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်ရေနံ Air ကိုပျံ့နှံ့
လူမီနီယမ်အလွိုင်းကား USB အနံ့ Air ကိုပျံ့နှံ့
ရနံ့ကုထုံး Nebulizer မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ကား [Essential Oil Car Diffuser] ကားခွက်တွင်းရှိနေရာတွင်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ ဤသည်သယ်ဆောင်ပျံ့သင့်ရဲ့ဘက်စုံလူနေမှုပုံစံစတဲ့အဆင့်သစ်ကိုယူလိမ့်မယ်။ [Aroma Diffuser] Mini Aroma diffuser...
ရေသယ်ဆောင်နိုင်သော USB Wood Aroma Car Diffuser မရှိပါ [USB Powered] - ကားခွက်ကိုင်ဆောင်သူအတွက်သင့်တော်သည်။ ၁၀၀% သန့်စင်သော peppermint aroma oil နည်းနည်းလေးကသင့်ကားအတွင်းရှိမလိုလားအပ်သောအနံ့များကိုဖယ်ရှားပေးရန်၊ သင်၏စွမ်းအင်ပမာဏကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်လမ်းခရီးရှည်များတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။...
ကားအတွက် OEM / ODM / OBM Service Aroma Essential Oil Diffuser တိုးတိုးလေး - တိတ်ဆိတ်သောစစ်ဆင်ရေးအနံ့ပျံ့: Adopted ultrasonic မှုန်ရေမွှားနည်းပညာ။ ဆူညံသံအဆင့်နှင့် 40dB ကဲ့သို့နိမ့်ကျသောစစ်ဆင်ရေး။ အိပ်ခန်း၊ စာသင်ခန်း၊ ရုံးခန်း၊ ကလေးခန်းစသည်တို့အတွက်သင့်တော်သည်။3Spray Modes Ultrasonic Diffuser: Function...
Car Mist Aroma Mini Diffuser မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ USB >> ပံ့ပိုးမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများ - ဤကား humidifier aroma diffuser သည်သင်၏ကားကိုချိုမြိန်စေရန်အဆီများကိုပံ့ပိုးပေးပြီးသင်မောင်းနှင်ရာတွင်ပျော်ရွှင်သည်။ >> ကား၊ ခရီး၊ နေအိမ်၊ ရုံးခန်းအတွက်ကားခွက်ကိုင်ဆောင်သူ၊ USB ပါ ၀ င်သော၊...
အသုံးပြုသူလက်စွဲနှင့်အတူ USB Aroma Diffuser Nebulizer စက် DOMFUSER DIFFUSER NEBULIZER ကို - အခန်းကိုမိနစ်အတွင်းသန့်ရှင်းသော၊ အော်ဂဲနစ်နှင့်သန့်ရှင်းသောရနံ့များဖြင့်ဖြည့်သည် - မည်သည့် Ultrasonic ပျံ့နှံ့မှုထက်မဆိုသာလွန်သည်။ AROMA DIFFUSER သည်အခန်းကျယ်ကြီးများ၊ ခန်းမများ၊ မီးဖိုချောင်ကြီးများ၊...
အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ကိုရေမရှိ အာမခံထားသောအရည်အသွေး - ယေရှု၏ခိုင်ခံ့သောအာမခံဖြင့်တစ်နှစ်အာမခံချက်။ သင့်တွင်ပြproblemနာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းပါလိမ့်မည်။ စစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှု - ကြိုးမဲ့၊ အားပြန်သွင်းနိုင်။ အဆင်ပြေပါသည်။ ဤသည်ရနံ့ပျံ့နှံ့သွားလာမှု, ယောဂ, ရုံး,...
သံပုရာမရှိမဖြစ်ဆီနှင့်အတူလျှပ်စစ်ရနံ့ကုထုံပျံ့ 1. ဖလားဒီဇိုင်းအနံ့ပျံ့: PP ပစ္စည်း, အရည်အစင်းဒီဇိုင်း, အလင်းအသွင်အပြင်, မော်တော်ကားသန့်စင် humidification ခွက်, ယာဉ်စံကျန်းမာခရီးသွားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ 2. One-button ကိုပြောင်းလဲမည်: ပျံ့ nebulizing တစ်ခုမှာ-button ကိုထိန်းချုပ်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ ရနံ့ကုထုံ SPA...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 10.77 - 9.23 / Piece/Pieces
Walmart ကားသစ်သားမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ကားတစ်စီးပျံ့စတိုင်များနှင့်ချောအမျိုးမျိုးအတွက်ကားတစ်စီး, ရေချိုးခန်း, အိမ်, ယောဂ, အားကစားရုံများနှင့်ရုံးအနံ့ရေနံပျံ့ features, အလှဆင်မဆိုကြင်နာဘို့ပြီးပြည့်စုံသောရနံ့ကုထုံပျံ့။ သင်တစ်ဦးတောသစ်သားရေနံပျံ့များအတွက်မြျှောအပေါ်များမှာသို့မဟုတ်ခေတ်ပြိုင် high- Matte finish...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Nebulization လျှပ်စစ်လှငျပျံ့ နီးပါးတိတ်ဆိတ် - နှောင့်အယှက်စက်ဆူညံသံနှင့်အတူအခြားအမွှေးအကြိုင်ပျံ့မတူပဲ, ဒီခရီးဆောင်ပျံ့အိပ်ခန်း, ဆိတ်သငယ်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းနှင့်ယောဂအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော၎င်း၏တိတ်ဆိတ်စစ်ဆင်ရေးပါရှိပါတယ်။ လက်ရာမြောက်သောဒီဇိုင်း - လက်ရာမြောက်သောအသွင်အပြင်,...
ရီးရဲလ် Wood ကပျရနံ့ကုထုံ Nebulizer ပျံ့ ဤသည်လှလှပပဒီဇိုင်းရနံ့ကုထုံပျံ့သဘာဝမှောင်မိုက်သို့မဟုတ်အလင်းသစ်သားနှင့်တကွကြွလာမယ့်ဖန်ပုလင်းအတွင်းမှ setted ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးကတခြားအနံ့ပျံ့မတူဘဲဒီတစ်ခုအခါအဆီများနှင့်အဆက်အသွယ် corrode မယ်လို့အဘယ်သူမျှမပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။...
Nebulizer မရှိမဖြစ်ရေနံ USB အနံ့ပျံ့လှငျ လှငျ-အတော်များများမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ပျံ့ nebulizing အဆိုပါ oils.This diffuse မှရေကိုအသုံးပြုပါကရေမရှိသောနှင့်မျှမတို့အပူကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကွဲပြားပေမယ့်နေဆဲလေထုထဲသို့ရနံ့့ညာဘက်ငွေပမာဏ diffuses ဒါကြောင့်သင်၏အကျိုးကျေးဇူးများအပေါငျးတို့သရ...
အိတ်ဆောင် Wood ကအကောင်းဆုံးကားပျံ့မရှိမဖြစ်ဆီ UNIQUE DEAIGN - သဘောသဘာဝ, Wood ကကောက်ပဲသီးနှံရနံ့ကုထုံအသစ်အဆင့်မြင့် ultrasonic ပျံ့, အာကာသ-saving Ergonomics အရွယ်အစားနှင့်တိုးတိုးလေး-တိတ်ဆိတ်စစ်ဆင်ရေး၏အရောင်။ စင်ကြယ်သောမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ - 100% မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုအသုံးပြုသည်, USB ကတဆင့်အလုပ်လုပ်။ သင့်အိမ်,...
မော်တော်ကားသည်အနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်ရေနံ Air ကိုပျံ့နှံ့ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်: USB ကပျံ့, ရေချိုးခန်းအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော, ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်း, လေ့ကျင့်ခန်းကအခန်း, ယောဂ Nook, စားစရာခန်း, ရုံးများသို့မဟုတ်မည်သည့်အသေးတဲ့အခန်း။ အရမ်းခရီးသွားဘို့ကြီးသော။ Mini ကိုပျံ့အသံတိတ်ဒီဇိုင်း:...
လူမီနီယမ်အလွိုင်းကား USB အနံ့ Air ကိုပျံ့နှံ့ USB Port & ယာဉ်ဖလား Holder ဒီဇိုင်း: သင်၏ကားထဲတွင် Plug ကြောင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုယူခံရဖို့ခရီးဆောင်သည်နှင့်မဆိုမော်တော်ယာဉ်ခွက်ကိုကိုင်ဆောင်သူမှဿုံကိုက်ညီ။ အသံတိတ်ဒီဇိုင်း: အိမ်သို့မဟုတ်ရုံးမှာဒီလျှော့ပေါ့ရနံ့ကုထုံပျံ့ကိုသုံးပါ။...
တရုတ်နိုင်ငံ Nebulizing ပျံ့ ပေးသွင်း
Nebulizing ပျံ့ငွေ့ပျံအောင်မြင်ရန် nebulization ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြု Ultrasonic ရနံ့ကုထုံပျံ့တဲ့တိကျတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်သေးငယ်တဲ့အမှုန်သို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၏ပျက်ပြားတွန်းအားပေးနှင့်မြင့်မားသောအလျင်, ဖိအားပေးထားတဲ့လေထုစီးအဖြစ်အထူးဒီဇိုင်းဂျက် nozzle လိုအပ်သည်။ ရေငွေ့ပျံနှုန်းမြင့်မားအရှိန်မြှဖြစ်ပါတယ်နီးပါးချက်ချင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ၏အမှုန်၎င်းတို့၏သဘာဝအပြည်နယ်၌သင်တို့ကိုရောက်ရှိဖို့နှင့်၎င်းတို့၏မူရင်းကုထုံးအကြိုးကြေးဇူးမြားအပေါငျးတို့သဖြင့်သင်တို့ကိုပေး။ ဒါကြောင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနည်းလမ်းကိုနှင့်အတူမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံရေအားဖြင့်ရောမပေးပါ။ မရှိမဖြစ်ရေနံများ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံရိုးရှင်းစွာအပြောင်းလဲမဟုတ်ပါထိုနည်းတူမရှိအပူ, သင့်အကြိုက်ဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ add ပြန်ထိုင်ပြီးအနားယူလိုအပ်ပါသည်!
USB အနှောအနည်းငယ်မျှသာဒီဇိုင်းနှင့်အတူမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Nebulizing ။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်း-size ကိုသင့်အိမ်, ရုံး, ကားများနှင့်ခရီးသွားအဘို့သင့်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာများအတွက်ဿုံကိုက်ညီ။ သင်စင်နှင့် undiluted အနံ့များကိုမူထူးခြားတဲ့ Atom နည်းပညာ။
Nebulizer ရေနံပျံ့များအတွက်ရမှတ်: အဘယ်သူမျှမရေသို့မဟုတ်အပူ; Atom နည်းပညာ; စင်ကြယ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ။
Glass Nebulizing ပျံ့